MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS – hoo!haa!!
MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS
Otu n’ime nnukwu mmemme ndi otu Kraist na-eme n’ụwa nile gbaa gburu gburu bu mmemme ncheta afụfụ na ọnwụ tinyekwara mbilite n’ọnwụ Jizọs Kraist. N’eziokwu, enwekwara ọtụtụ mmemme ọzọ ndi otu Kraist na-emegasi dịka Ekeresimesi, mmiri- chukwu Jizọs, nrọgoro Jizọs n’enigwe nakwa ọtụtụ ndi ọzọ. Mana mmemme nke Isita bụ ọpụrụ iche.
Ebe mmemme ndi ọzọ kwụbara mmadụ n’ụzọ olile-anya, mmeụme nke lsita wetara olile anya mmadụ na mmezu.
Dika Jizọs n’onwe ya si kwue, ọbụrụ na mkpụrụ ọka adaghị nwụọ, ọgaghị amịta mkpụrụ. Jizọs bụ mkpụrụ ọka ahụ! Ọdawokwa ma nwụọ, nkea pụtara na ọbịbịa ya n’ụwa n’ụdị nke mmadụ amịtawo mkpụrụ. Mkpụrụ nke nzọpụta wee nye anyị bụ mmadụ.
Mana onwere otu nnukwu ihe di mkpa n’ọnwụ ya n’ebe anyị nọ. Nkea bụ na anyị ga-esetipụ aka ma ghọrọ mkpụrụa. Ọbụrụ na ukwu osisi ṅmmadụ amịsịa mkpụrụ ọma ma ọnye nwe osisi ahụ agaghị ghọrọ mkpụrụ osisi ahụ, ihe ọpụtara bụ na mkpụrụ osisi ndi ahụ ga-ala n’ighi.
Ụzọ anyị ga-esi ghọrọ mkpụrụ ọmaa ahụhụ na ọnwụ Jizọs mịtara anyị bụ site n’iso ụzọ ya dịka nanị onye nwe anyị nakwa onye nzọpụta anyị. Anyị ga-ewepu aka anyị na njo. Anyị ga-ahapụ imegide mmadụ ibe anyị. Nke kasị nke bụ na anyị ga-enye aka gbasaara ọha n’eze oziọma maka nwokea aha ya bụ Jizọs bụ onye ji maka ịgbapụta ụwa na njọ wee bịa taa ahụhụ ma nwụọ maka nzọputa mụ na gị. Ihe ndi otu Kraist kpọrọ ụbọchị taa Jizọs kubere n’elu obe bụ Fraide Ọma (Good Friday). Ajụjụ wee bụrụ kedu ka mmadụ si kpọọ ụbọchị onye nzọpụta ya nwụrụ ụbọchị oma? Azịza nkea bụ na ọbụ taa ka ya bụ mkpụrụ ọka dara nwụọ. Anyị wee mara na ihe ana-akọ bụ eziokwu maka na mgbe adịghị anya, anyị gaje ịghọrọ ezi mkpụrụ ọnwụ nna anyị ukwu bụ Jizọs mịtara mgbe anyị onwe anyị ga ahapụ ụwaa lakwuru ya n’eligwe. Anyị ga-ahụta mpụta ihe nkea dịka nkwa di kwere nwanyị ụbọchị lsita, mgbe ya onwe ya ga ebili n’ọnwụ, nke dịworo anyị nso ugbua. Ụmụ lgbo, ka taa bụkwara anyị Fraide ọma n’eziokwu. Ya gazienu!
Previous Post: OGBENYE/ỤBỊAM/AHỤHỤ
Next Post: MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS 2